Zôdiaka - Wikipedia
Ny zôdiaka dia faribolana miendri-pehikibo, tsy hita maso fa eritreretin' ny saina, eny amin' ny bolan-danitra manodidina ny Tany ka ny ivony dia mifanandrify amin' ny toerana misy ny Tany, izany hoe ny lalana omban' ny Tany manodidina ny Masoandro. Ny anaran' ny antokon-kintan' ny zôdiaka sy ny evan' ny zôdiaka amin' ny teny latina dia ireto: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Ophiuchus, Sagittarius, Capricornus, Aquarius ary Pisces. Misy karazany roa ny zôdiaka dia ny zôdiakam-panandroana mahazatra izay atao hoe zôdiaka mikisaka, sy ny zôdiaka amin' ny haikintana (zôdiakan' antokon-kintana miampy ny antokon-kintana Ophiuchus) izay atao hoe zôdiakan-kintana. Mitovy anarana ny antokon-kintan' ny zôdiaka sy ny evan' ny zôdiaka fa tsy mitovy fari-potoana na fari-danitra isehoana na tondroina. Ireto avy ny anaran' izy ireo amin' ny teny malagasy: Ondrilahy (na Alahamady), Ombilahy (na Adaoro), Kambana (na Adizaoza), Foza (na Asorotany), Liona (na Alahasaty), Virijiny (na Asombola), Mizana (na Adimizana), Maingoka (na Alakarabo), Mpitifitra Tsipìka (na Alakaosy), Tandrok' Osy (na Adijady), Mpitondra Rano (na Adalo) ary Hazandrano (na Alohotsy).
2 Antokon-kintana sy evan' ny zôdiaka
2.1 Antokon-kintan' ny zôdiaka
2.2 Evan' ny zôdiaka
2.3 Fifandraisan' ny antokon-kintana sy ny evan'ny zôdiaka
2.3.1 Ny zôdiakan-kintana
2.3.2 Ny zôdiaka mikisaka
2.3.3 Inty ny fafana maneho ny tsy fitovian' ireo zôdiaka roa ireo:
3 Ny zôdiaka sy ny fanandroana
3.1 Ny zôdiaka sy ny fanandroana amin' ny ankapobeny
3.1.1 Ny fanandroan-kintana
3.1.2 Ny fanandroan' eva
5 Loharano sy fanamarihana
Ny teny hoe zôdiaka dia avy amin' ny teny grika hoe ζωδιακός κύκλος / zôdiakós kúklos izay midika hoe "faribolan-java-manana aina madinika". Ny hoe ζῴδιον / zốdion dia midika hoe "zava-manana aina madinika" satria ireo antokon-kintana ao amin' ny zôdiaka, afa-tsy ny Libra ("mizana"), izay ampahany tao amin' ny antokon-kintana Scorpius ("maingoka"), sy ny Aquarius ("mpanidin-drano"), dia maneho sarin-java-manana aina, araka ny fieritreretan' ny mpandinika kintana sy ny mpanandro amin' ny kintana fahizay
Antokon-kintana sy evan' ny zôdiakaHanova
Antokon-kintan' ny zôdiakaHanova
Ny antokon-kintan' ny zôdiaka dia ampahany amin' ny antokon-kintana rehetra izay hoatry ny andalovan' ny Masoandro sy ireo planeta miaraka aminy. Ireto ny anaran' ny antokon-kintana telo ambin' ny folon' ny zodiakan-kintana amin' ny fiteny latina:
Sagittarius ("mpitifitra amin' ny tsipìka")
Capricornus ("tandrok' osy")
Aquarius ("mpitondra rano")
Ny faritry ny lanitra misy ny antokon-kintana tsirairay dia tsy mitovy habe satria tsy voazara mitovy nefa koa tsy fantatra mazava fa nifanarahan'ny manam-pahaizana ny tena fetr' izany faritra tsirairay izany.
Evan' ny zôdiakaHanova
Notsinjaraina ho faritra roa ambin' ny folo mitovy ny zôdiaka tamin' ny taonjato faha-5 ka samy manana 30° ny evan' ny zôdiaka tsirairay izay mitovy anarana amin' ny antokon-kintana tokony hifanandrifindrify aminy. Ny roa ambin' ny folo amin' ireo ihany no mitovy anarana amin' ny antokon-kintan' ny zôdiaka. Tsy isany ny Ophiuchus. Ny Ondrilahy (latina: Aries) no eva voalohany izay mifanandrify amin' ny faritry ny lanitra idiran' ny Masoandro ao amin' ny ekinôksa amin' ny lohataona any amin' ny ila-bolantany avaratra (izany hoe 20 na 21 Marsa) izay fari-potoan' ny taom-baovao tao amin' ny tetiandro maro tamin' ny Andro Taloha.
Izao ny anaran' izy ireo amin' ny fiteny latina sy malagasy sy arabo ary frantsay:
Teny latina Teny malagasy Teny arabo Teny frantsay
Aries Alahamady Al-Hamal Bélier
Taurus Adaoro Ath-Thur Taureau
Gemini Adizaoza Al-Djuza Gémeaux
Cancer Asorotany As-Saratan Cancer
Leo Alahasaty Al-Asad Lion
Virgo Asombola As-Sumbul Vierge
Libra Adimizana Al- Mizan Balance
Scorpius Alakarabo Al-Akrab Scorpion
Sagittarius Alakaosy Al-Kaus Sagittaire
Capricornus Adijady Al-Djadi Capricorne
Aquarius Adalo Al-Dalu Verseau
Pisces Alohotsy Al-Hut Poissons
Fifandraisan' ny antokon-kintana sy ny evan'ny zôdiakaHanova
Ny fari-potoana ao amin' ny zôdiakan' antokon-kintana, izay atao hoe zôdiakan-kintana (frantsay: zodiaque sidéral), dia tsy ampitovizina amin' ny zôdiakan' ny eva, izay atao hoe zôdiaka mikisaka (frantsay: zodiaque tropical) ary ny faritry ny antokon-kintan' ny zôdiaka.
Ny zôdiakan-kintana dia zôdiaka azo avy amin' ny fampifanandrifiana ny fizarana ny faritry ny zôdiaka amin' ny antokon-kintana mitovy anarana aminy nefa natao izay hampitovy ny haben' ny faritra (30° avy) fa tsy nampitovizina amin' ny faritry ny antokon-kintan' ny zôdiaka (izay indraindray mihoatra ny 30°, indraindray latsaka).
Ny zôdiaka mikisakaHanova
Ny zôdiaka mikisaka (zôdiakam-panadroana mahazatra) dia zôdiaka tsy manaraka ny "fihodin' ny kintana" fa manaraka ny an' ny Masoandro sy ny fizaran-taona ka tsy mitovy amin' ny hafainganam-pihodinan' ny zôdiakan-kintana sady ireo eva ao aminy dia tsy mifanandrify amin' ny antokon-kintana mitovy anarana aminy. Ny zôdiaka mikisaka no fampiasa indrindra amin' ny fanadroana na dia lazaina fa ny kintana no fototry ny fanandroana. Na dia izany aza dia misy ny fanandroana tena mifototra amin' ny zôdiakan-kintana na ny antokon-kintan' ny zôdiaka mihitsy ka atao hoe fanandroan-kintana.
Inty ny fafana maneho ny tsy fitovian' ireo zôdiaka roa ireo:Hanova
Anarana Eva Zodiaka mihodina Antokon-kintana Zodiakan-kintana
Aries (Alahamady) ♈ 21 Marsa - 20 Avrily
18 Avrily - 13 Mey
15 Avrily - 15 Mey
Taurus (Adaoro) ♉ 21 Avrily - 20 Mey
13 Mey - 21 Jona
16 Mey - 15 Jona
Gemini (Adizaoza) ♊ 21 Mey - 21 Jona
21 Jona - 20 Jolay
16 Jona - 15 Jolay
Cancer (Asorotany) ♋ 22 Jona - 22 Jolay
20 Jolay - 10 Aogositra
16 Jolay - 15 Aogositra
Leo (Alahasaty) ♌ 23 Jolay - 22 Aogositra
10 Aogositra - 16 Septambra
16 Aogsitra - 15 Septambra
Virgo (Asombola) ♍ 23 Aogositra - 22 Septambra
16 Septambra - 30 Oktobra
16 Septambra - 15 Oktobra
Libra (Adimizana) ♎ 23 Septambra - 22 Oktobra
30 Oktobra - 20 Novambra
16 Oktobra - 15 Novambra
Scorpius (Alakarabo) ♏ 23 Oktobra - 22 Novambra
20 Novambra - 29 Novambra
16 Novambra - 15 Desambra
Ophiuchus 29 Novembra - 18 Desambra
Sagittarius (Alakaosy) ♐ 23 Novembra - 21 Desambra
18 Desambra - 20 Janoary
16 Desambra - 14 Janoary
Capricornus (Adijady) ♑ 22 Desambra - 20 Janoary
20 Janoary - 16 Febroary
15 Janoary - 14 Febroary
Aquarius (Adalo) ♒ 21 Janoary - 19 Febroary
16 Fenroary - 11 Marsa
15 Febroary - 14 Marsa
Pisces (Alohotsy) ♓ 20 Febroary- 20 Marsa
(29 na 30 andro)
11 Marsa - 18 Avrily
15 Marsa - 14 Avrily
TOTALY 365 na 366 andro 366 andro
Ny zôdiaka sy ny fanandroanaHanova
Ny zôdiaka sy ny fanandroana amin' ny ankapobenyHanova
Ny evan'ny zôdiaka dia ampasaina amin' ny fanandroana mba hatao fiaingana ara-potoana sy arak' erana ka ahafahana manao ny fampifandraisana izay fototr' ity fanao ity. Ampiasaina ao amin' ny fanandroana ny zavatra isankarazany toy ny planeta, ny Masoandro, ny Volana, ny faravodilanitra ary ny faritra na teboka amin' ny vohon' ny tany mifanandrify amin' ny Masoandro mitatao vovonana. Ny fananandroana miankina amin' ny zôdiaka dia misy karazany roa koa noho izany, dia ny fanandroan-kintana sy ny fanandroan' eva (fanandroana mahazatra ny maro).
Ny fanandroan-kintana (frantsay: astrologie sidérale) dia miankina tanteraka amin' ny kintana na ny antokon-kintana (antokon-kintan' ny zôdiaka indrindra) izay azo jerena tokoa eny amin' ny lanitra. Mety ho ny maso fotsiny no enti-mijery izany mivantana na amin' ny alalan' ny fampiasana fitaovana moderna.
Ny fanandroan' evaHanova
Ny fanandroan' eva na fanandroa-mikisaka (frantsay: astrologie tropicale) kosa dia miankina amin' ny fizaran-taona faritan' ny toerana misy ny Masoandro miohatra amin' ny Tany. Ity fanandroana ity no be mpampiasa indrindra amin' ny Tandrefana na dia efa tsy mifanaraka amin' ny antokon-kintan' ny zôdiaka intsony aza ny evan' ny zôdiaka.
Miteraka fahadisoan-kevitra ny tsy fahafantarana ny fisian' ny zôdiaka roa. Ohatra, ny olona teraka ao amin' ny evan' ny Mizana (23 Septambra - 22 Oktobra) dia tsy teraka ao amin' ny fotoan' ny antokon-kintana Mizana (30 Oktobra - 20 Novambra) fa ao amin' ny an' ny antokon-kintan' ny Virijiny noho ny tsy fifanarahana misy amin' ny antokon-kintan' ny zôdiaka sy ny evan' ny zôdiaka. Toy izany koa raha misy olona lazaina fa teraka manandrify ny evan' ny Mpitifitra Tsipika (23 Novambra - 21 Desambra) dia tsy teraka amin' ny antokon-kintan' ny Mpitifitra Tsipika fa amin' ny antokon-kintan' ny Maingoka izy raha ny tena marina.
Raha ny fanandroana malagasy no iaingana dia mbola miitatra io elanelana io eo amin' ny volana malagasy sy ny antokon-kintan' ny zôdiaka.
↑ Ny ekinoksa dia fotona tokony hampitovy halava tanteraka ny andro sy ny alina (raha tsy niendrika kapila fa niendri-teboka ny masoandro) ka amin'ny 20 marsa (na 21 tsindraindray) sy amin'ny 22 Septambra (na 23 tsindraindray).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zôdiaka&oldid=1010101"
Dernière modification le 20 Martsa 2021, à 20:05
Voaova farany tamin'ny 20 Martsa 2021 amin'ny 20:05 ity pejy ity.